वाणिज्य बैंकरुमा कोरोना कहर उच्चः करिब ७ हजार कर्मचारी संक्रमित सय भन्दा बढि शाखा बन्दः राष्ट्र बैंक बेखबर ! - Aathikbazarnews.com वाणिज्य बैंकरुमा कोरोना कहर उच्चः करिब ७ हजार कर्मचारी संक्रमित सय भन्दा बढि शाखा बन्दः राष्ट्र बैंक बेखबर ! -
नेपालमा अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालका २७ वाणिज्य बैंकका करिब ७ हजार कर्मचारी संक्रमित भएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । देशभरी करिब १०० शाखा बन्द नै भएका समाचार बाहिर आएका छन् । अधिकाशं कर्मचारीहरु घरबाटै काम गरिरहेको भेटिएको छ । खासगरि प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक लगायत १ दर्जन बैंकका कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएको खुलेको छ ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा सल्कीएको कोरोनाले बैंकिङ्ग सेवामा असर गरेको देखिन्छ । अत्यावश्यक सेवा भित्र बैंक र वित्तिय संस्था पर्ने भएकोले सेवा दिने दायित्व बैंक र वित्तिय संस्थाको छ । तर, जीवन नै जोखिमा राखेर सेवा दिने बैंक कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुविधा दिनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । गतवर्ष कोरोना भाइरसबाट माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व सीइओ निरज श्रेष्ठको अकालमै मृत्यु भयो भने २ दर्जन कर्मचारीले ज्यान नै गुमाएका थिए । हजारौं हजार भन्दा बढि बैंक कर्मचारी विरामी परेका समाचार हामीले दिएका थियौं ।
पछिल्ला केही दिनयता कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विहिबार एकैदिन १२ हजार भन्दा बढि कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । संक्रमणको जोमिख अन्य क्षेत्रमा जस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिए पछि वर्क फ्रम होमको व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका १६६ जना कर्मचारी कारोना भाइरसबाट संक्रमित भएको देखिन्छ । संक्रमित कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।
बैंक तथा बीमा कम्पनीमा पनि घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकले केही शाखा कार्यालय नै बन्द गरेका छन् भने अधिकांश कार्यालयमा वर्क फ्रम होम तथा आलोपालो प्रणाली लागू गरेको देखिन्छ । विगतका दिनहरूमा जस्तै बैंक तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि यी क्षेत्रले ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्था ल्याएका लागू गरिएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र भिडभाड हुने क्षेत्र हो । सेवाग्राहीको भिडभाड हुने तथा नियमित सेवा दिनैपर्ने भएकाले यी क्षेत्रलाई संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकका करिब ७ हजार बढी कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित छन् । हाल हरेक २ दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढिरहेको देखिन्छ । मुलुकभरका वाणिज्य बैंकका ६० वटा शाखा कार्यालय बन्द भएको भेटिएको छ ।
कर्मचारीमा संक्रमण बढेसँगै सकेसम्म घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाइएको र कार्यालयमा उपस्थित हुनैपर्ने कर्मचारी मात्रै आउने व्यवस्था मिलाइएको बैंकहरुको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भौतिक रुपमा हुने कामलाई सकेसम्म कम गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जनशक्ति तथा सेवाग्राहीमा संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाइ सेवा प्रवाह गर्न, एटीएम बुथहरुबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न ढोका खुला राखी सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको देखिन्छ । जे भएपनि बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले केही सजिलो निर्णय नलिए बैंक र वित्तिय संस्था कोरोना कहरको हटलाईन बन्ने निश्चित देखिन्छ । सचेत भया ।
नबिल बैंकको महाप्रबन्धकमा मनोज ज्ञवालीको बढुवा
दाहालको अस्थिर चरित्र नै समस्याको जड
नेको इन्स्योरेन्सले लकडाउनको बीच आह्वान गर्यो साधारण सभा
एभरेष्ट बैंकमा ओम्नी च्यानल प्रणालीमा अपग्रेड